Curso de birmanês > português| Praia | Tradução
Curso birmanês - Praia
A praia ပင်လယ်ကမ်းခြေ / ဘိ (ချ) - piN lai kaN kyé / bi (che)
Sabe onde posso comprar uma bola? ဘောလုံးဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ - bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
Há alguma loja por qui? ဒီတည့်တည့်သွားရင် ဆိုင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် - di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
Uma bola ဘောလုံး - bau loN
Binóculos မှန်ပြောင်း - mhaN pyaung
Um boné ကက်ဦးထုပ် တစ်လုံး - ket au thaukʔ tit loN
Toalha မျက်နှာသုတ်ပုဝါ - myét nha thauk pu wa
Sandálias ညှပ်ဖိနပ် - nyatʔ phi nat
Balde ရေပုံး - yé poN
Protector solar နေရောင်ကာ ခရင်(မ) - nai yaung ka kha riN (me)
Calções de banho ရေကူးဘောင်းဘီ - yé kū baung bi
Óculos de sol နေကာမျက်မှန် - nai ka myet myamaN
Crustáceo ပင်လယ်စာ - piN lai sa
Apanhar sol နေစာလှုံ - nai sa loN
Soalheiro နေသာတယ် - nai tha tai
Pôr-do-sol နေဝင်ချိန် - nai wiN chain
Guarda-sol နေကာထီး - nai ka tī
Sol နေ - nai
Insolação နေသာချိန် - nai tha chain
É perigoso nadar aqui? ဒီမှာရေကူးရင် အန္တရယ် ရှိလား - di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
Não, não é perigoso အန္တရယ်မရှိပါဘူး - ane de yai me shiʔ pa bū
Sim, é perigoso tomar banho aqui ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာရေကူးလို့မရပါဘူး - hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
Nadar ရေကူးတယ် - yé kū tai
Natação ရေကူး - yé kū
Mar ပင်လယ် - piN lai
Areia သဲ - thé
Qual éaprevisão do tempo para amanhã? မနက်ဖြန်အတွက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် ဘယ်လိုလဲ - me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
O tempo vai mudar ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲရှိတယ် - ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
Vai chover မိုးရွာလိမ့်မယ် - mō yawa laint mai
Vai haver sol နေသာလိမ့်မယ် - nai tha laint mai
Vai haver muito vento လေတိုက်လိမ့်မယ် - lai taikɁ laint mai
Fato-de-banho ရေကူးဝတ်စုံ - yé kū wut sauN
Sombra အရိပ် - ah yaitɁ